TEFAL FRY DELIGHT ▷ Falanqaynta, Ra'yiga iyo Qiimaha ugu Fiican 2022
Tefal Fry Farxad FX1000
La cusbooneysiiyay 10/2020
Ma jeclaan lahayd inaad ku haysato jikadaada alaab cusub oo aad ku shiili karto cunto saliid yar ama xitaa aan lahayn? Halkaan ayaan idinkugu soo bandhigaynaa Tefal Fry Delight, ka saliid aan saliid lahayn oo leh teknolojiyad garaaca hawada, oo u gaar ah qaabka iyo naqshadeynta, taas oo noo ogolaanaysa inaan diyaarino suxuunta aan aad u jecelnahay caafimaad badan.
Maqaalkan waxaad si qoto dheer u ogaan doontaa sifooyinka qalabkan, faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay, qiimaynta dadka isticmaala qaarkood yaa isku dayay oo wax ka iibsanayay qiimaha ugu fiican si aad doorashadaada uga dhigto mid la isku halayn karo. Markaa haddii aad ka fikirayso inaad hesho mid ka mid ah shiilanyada ugu qiimaha badan, ha ka bixin shaashaddaada oo ogow faa'iidooyinka ay summada Tefal kuu keenayso.
➤ Astaamaha lagu soo bandhigay Tefal Fry Delight
Marka hore aan falanqeyno sifooyinka ugu muhiimsan ee shiilan caafimaadka leh iyo faa'iidooyinka ay ina siiso marka la karinayo
▷ Awoodda 800 garaam
Fryer-ku wuxuu leeyahay awoodda ugu badan ee 800 garaam ama 0.8 litir, oo ku filan in lagu diyaariyo qaadashada qiyaastii 2/3 qof. Gudaha calaamadda tani waa qaabka leh awoodda ugu yar, oo ku habboon kuwa aan u baahnayn wax badan.
▷ 1400 Watts oo Awood ah
Qaabkan Tefal waxa uu leeyahay iska caabin leh awoodda ugu badan 1400W, kaas oo dhigaya meel dhexdhexaad ah oo isticmaalka tamarta ah. Saamiga quwadiisa/awoodeeda ayaa wanaagsan waxayna kuu ogolaaneysaa inaad hesho natiijooyin wanaagsan sida loo kariyey.
Waxay ku qalabaysan tahay heerkulbeeg analooga ah oo ogolaanaya habaynta awoodda iyadoo ku xiran heerkulka (inta u dhaxaysa 150 iyo 200 darajo). Heerkulbeegga la sheegay waxaa ku jira muraayad xariir ah oo leh waqtiga iyo talooyinka heerkulka nooc kasta oo cunto ah. Iyadoo ku xiran goobta korantada, Fryer-ka Caafimaadka leh wuxuu ogolaanayaa: shiil, dubista, dubay iyo maraqa taasoo ka dhigaysa doorasho wanaagsan oo wax lagu kariyo.
Waad ku mahadsan tahay daahan non-ul wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso ah oo fudud uga saarto cuntada adigoon ku dhejin gudaha. Intaa waxaa dheer, isticmaalka saliid aad u yar iyo nidaamkeeda hermetic waxay baabi'isaa qulqulka iyo waxay ka takhalustaa urta gudaha bay'ada hagaajinaysa isticmaalkeeda marka loo eego shiilanyada kale ee caadiga ah.
Qaybaheeda la saari karo waxay fududeeyaan nadiifinta weelka weelka iyo dibedda qalabka, kaliya maro qoyan ayaa ku filan in laga saaro wasakhda soo hartay iyada oo aan dhib lahayn.
Qalabkan qaboojiyaha kulul waxaa lagu qalabeeyaa a 0 ilaa 30 daqiiqo saacadeeyaha analoogga si loo waafajiyo meertada cuntada ee aanu diyaarinayno. Saacaduhu wuxuu u shaqeeyaa sidii dab-damis koronto ah iyo dhammaadka wakhtiga la doortay ka saar mashiinka isla markaasna ay ka digto a dhawaaqa dhawaaqa.
Delight Fry wuxuu leeyahay naqshad labajibbaaran, xarrago leh oo leh taabasho qabow balaastig ah midab madow iyo cawl oo ka dhigaya muuqaal soo jiidasho leh. Waa la dul fadhiyaa cagaha aan simbiriirixnayn oo uu nidaam leeyahay ee gariiradda fiilada.
Fryer-ka cuntada wuxuu la shaqeeyaa a habka khaanadaha, gacanka go'i karo iyo dambiisha la saari karo. Inkasta oo ay yara weyn tahay, waa qalab aad u raaxo leh oo miisaankeedu yahay qiyaastii 6 kg.
Qalabka la saari karo ayaa dahaarka leh PTFE aan dheg lahayn, oo gebi ahaanba ka xor ah PFOA ama walxaha kansarka, dammaanad-qaadka alaab sii waaraya oo badbaado leh.
Cabirrada: 45,2 x 34,2 x 36,7 cm
Iyadoo la raacayo sharciga hadda jira iyo sababtoo ah waa qalab Yurub ah, waxay leedahay 2 sano damaanad cilladaha wax soo saarka awgeed. Intaa waxaa dheer, Tefal wuxuu ballan qaadayaa in mashiinkani uu noqon doono la dayactiri karo muddo ugu yaraan 10 sano ah.
Qiimaha Tefal Fry Delight FX100015
Fryer-gan kulul waxa uu leeyahay qiima iib ah oo qiyaastii ah 150 yuuro. Si kastaba ha ahaatee, waa caadi inaad haysato a qiimo dhimis xitaa gaari kara boqolkiiba 30. Haddii aad u aragto mid xiiso leh oo aad rabto inaad aragto dalabka hadda jira halkan ku dhufo:
Si loo fududeeyo isticmaalka qalabka, agabyada soo socda ayaa lagu daray iibka:
Astaanta Tefal waxa kale oo ay bixisaa laba qaybood oo ka dhigaya qaabka ugu fiican ee lagu kabo isticmaalka shiilan, inkasta oo labaduba ay tahay in si gaar ah loo iibsado:
Dubo si aad heer kale ugu darto
Ma jeclaan lahayd inaad aragto aaladda oo shaqaynaysa? Fiidiyowga soo socda waxaad awoodi doontaa inaad si faahfaahsan u aragto sida qaabkan loo isticmaalo
➤ Tefal Fry Delight: Fikradaha
Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee go'aan qaadashada waa ogaanshaha fikradaha isticmaalayaasha kale ee isku dayay shiilan. Shiilan caafimaad qaba ayaa waxaa qiimeeyay in ka badan 250 iibsade kuwaas oo tijaabiyay oo ka tagay qiimayno togan. Mashiinku wuxuu gaaray a celceliska qiimeynta 4,5 ee 5 taas oo ah tilmaame wanaagsan oo muujinaya tayada iyo natiijada ay bixiso.
Haddii aad raadineyso inaad sameyso maalgashi wanaagsan oo saliid ah oo aan saliid lahayn oo aad karisid noocyo kala duwan oo suxuun ah oo ka mid ah qalab isku mid ah, qaabkani wuxuu noqon karaa mid ka mid ah. Waa hal mashiin sumad la aqoonsan yahay oo uu khibrad u leeyahay qalabka heerkan oo kale, wuxuu leeyahay tayo wanaagsan iyo marka loo eego fikradaha isticmaalaha Natiijadu waa wanaagsan tahay.
▷ Faa'iidooyinka iyo khasaaraha FX100015
Summada Caalamiga ah iyo La aqoonsan yahay
La hagaajin karo 10 sano iyo SAT
Tartanka qiimaha sare
Miiska isbarbardhigga oo leh moodooyinka ugu fiican ee suuqa
saliid ma isticmaashaa mise ha isticmaalin? Cuntooyinka aan dufanka lahayn sida baradhada waa ku filan in lagu buufiyo wax yar, cuntooyinka dufanka leh sida hilibka looma baahna.
Qalabku ma la socdaa buug cunto karinta? Maya, laakiin waxa laga heli karaa bogga Mareegta Tefal
Ma la isticmaali karaa dambiisha la'aanteed? Waa inaad isticmaashaa dambiisha ama daasadda dubista.
Halkee baan ka iibsan karaa qayb ka mid ah? Shirkadda tefal waxay leedahay adeeg farsamo.
Ma loo isticmaali karaa in lagu dubayo rootiga? Haa, oo leh daasadda dubista.
Suxuun noocee ah ayaad ku diyaarin kartaa shiilan qoto dheer? Waxaad shiili kartaa, dubi kartaa, dubari kartaa ama hilib baraf ah, baradhada, digaaga, kalluunka, khudaarta, rootiga, macmacaanka, iwm.
➤ Iibso garaaca hawada shiilan
Haddii aad u malaynayso shiilan bilaa saliid ah inuu yahay moodelkii aad raadinaysay, waxaad ka heli kartaa online ka halkan:
(Codadka: 14 Celcelis: 4.2)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Tefal » Fry Delight FX1000